Amanqaku kaSumiya Sha malunga Martech Zone |
Amanqaku ngu Sumiya Sha
USumiya ngumbhali wewebhusayithi Imithombo yeendaba exoxiweyo. Njengombhali womxholo, uSumiya uzame uninzi loyilo lwewebhusayithi kwaye unethemba lokwabelana ngalo nabafundi bakhe.
NgeCawa, uDisemba 13, 2020 NgeCawa, uDisemba 13, 2020 Sumiya Sha
Ukuthenga isakhiwo, ikhaya, okanye indlu yondondo kubalulekile kutyalo mali… kwaye oko kwenzeka kanye kubomi bonke. Izigqibo zokuthenga izindlu nomhlaba zishukunyiswa luluvo lweemvakalelo eziphikisanayo ngamanye amaxesha- ke kuninzi ekufuneka kuthathelwe ingqalelo xa kuyilwa iwebhusayithi yokuthengisa izindlu nomhlaba ebanceda kuhambo lokuthenga. Indima yakho, njengearhente okanye umthengisi wezindlu, kukuqonda iimvakalelo ngelixa ubakhokelela kulwazelelelo kwaye